Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana: Ravalo ao amin’ny sokajin’ny tsy manam-bola
Fifidianana: Ravalo ao amin’ny sokajin’ny tsy manam-bola
Mizara roa tanteraka ny mpifaninana hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin’ny faha 07 novambra 2018 eto Madagasikara. Ny iray voalohany dia ahitana ireo sokajin’ny mpanam-bola, ka isan’ny voalohany amin’izany ingahy Andry Nirina Rajoelina izay efa nilaza fa nivonona amin’ny rehetra na ara-batana na ara-tsaina na koa ara-bola. Ny faharoa manaraka azy ao dia ingahy Hery Rajaonarimampianina izay filoham-pirenena ankehitriny. Mirehareha tanteraka ity filoha ity fa ny antokony HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) izay tarihin’ ingahy Rivo Rakotovao no matanjaka indrindra eto Madagasikara. Nefa voatery nametra-pialana noho ny antony fifidianana araka ny nambarany herinandro mahery lasa izay ny filohan’ity antoko ity.
Ny fahatelo manaraka azy ireo dia ingahy Ravelonarivo Jean izay avy amin’ny antoko ABA (Antokom-bahoaka Malagasy). Mpandraharaha iraisam-pirenena no sady manamboninahitra jeneraly misotro ronono amin’ny tafika Malagasy ny tenany.
Amin’ny sokajin’ny kandidà antonontonony ara-bola indray dia ahitana an’ingahy Pastora Mailhol izay avy amin’ny antoko GFFM ary tohanan’ny fiangonana Apokalypsy.
Eo amin’ny sokajin’ny sahirana ara-bola indray ny sisa rehetra. Isan’ny mitarika izany ingahy Ravalomanana Marc izay filohan’ny antoko Tiako eto Madagasikara. Tena tsy misy hatoraka intsony ity filoham-pirenena teo aloha ity satria mangina tanteraka amin’izao fotoana izao ny antoko TIM. Tsy hita intsony ny fisekosekoana sy ny fanaovana parady amin’ny “tee shirt” sy ny kasikety ary ny lambahoany toa ny fahita hatramin’izay. Lany ny vola nahodinkodina teto amin’ny firenena fahiny sy ny trafika isan-karazany izay natao tamin’ny fotoana nitondrana tamin’ny taona 2001-2008, ka nampifangaroana ny raharaham-pirenena sy ny fandraharahana tao amin’ny Tiko sy Magro.
Tsy azo adinoina fa ingahy Ravalomanana Marc no nitarika ny fividianana olona tamin’ny fifidianana teto Madagasikara izay nanomboka tamin’ny taona 2001. Nolazaina tamin’izay fotoana izay fa fomba amerikanina no nataony ary nampian’ny rainiboto na ireo “Allemands” izay mpanohana azy fatratra tamin’izany andro izany. Malazo dia malazo ny fihetsiketsehana ataon’ingahy Ravalomanana. Toa tsy hita intsony aza ity antoko ity ankehitriny.
Na izany aza dia sarotra ny tombantombana amin’izay mety ho lany amin’ity fifidianana ity. Ny zava-misy manerana an’i Madagasikara dia mimenomenona ny olona amin’ny ataon’ny mpanao politika. Manakiana ny fampiasana vola ny olona maro satria namitaka azy izany. Mifaly kosa ny ankilany satria mitosaka ny vola tsy nanasatra. Mifamahofaho be ny ady hevitra noho izany. Iza no handresy? Mety hitranga ve ny fahagagana amin’ity fifidianana ity ka ny tsy ampoizina handresy no hibata ny amboara? Hatramin’izao dia mbola sarotra no manome tombantombana ho an’izay ho mpandresy.